भोजनालय डिनरवेयर थोक | २ Ce सिरेमिक्स
पहिलो आठ आठ, विश्व संग खाना संग खाना संग
राम्रो चीन डिनरवार
प्रत्येक विवरण एक फरक विचार हो, आधुनिक उत्पादन प्रविधिको साथ पैदा गरिएको पशुहरूको लागि फरक विश्व।
खाना एक अन्तिम अनुभव मध्ये एक हो जसले शेफहरू र मानिसहरूलाई सँगै ल्याउँछ। हामी झुण्ड हौं कि दुईवटा आठ र color ्ग संग्रहमा दुईवटा आठ र color ्ग संग्रहबाट यस गर्मी आत्माले यस गर्मी आत्मालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र टोफको महत्वाकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
टेक्स्चर संग्रह - २०२१ नयाँ डिजाइन उच्च तापक्रम पोर्सिलेन डिनरवेयर रेष्टुरेन्ट होटेलका लागि अनौंठो डिजाइन सिरेमिक सेटहरू।
रातो र हरियो र with्गको साथ अद्वितीय टेबलवेयर, म्याट र चमकदार सतहको साथ, बिभिन्न डिजाइनहरूको साथ, खानाको साथ तपाईंको रेस्टुरेन्ट टेबलहरूमा राम्रोसँग सजाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। र विभिन्न शेफको सोचलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्।
कप्पर निलो - मोर्डन स्टाइल ग्रेडियन्ट ग्रे एन ग्लोसी पोर्सिलेन भोजनालय डिनरवेयर कस्टमको साथ थोक सेट गर्दछ।
प्रतिक्रियाशील र gla्ग ग्लेज् यस संग्रहको उज्यालो sopt हो। यो नयाँ रेस्टुरेन्ट डिनरवेयरबाट, तपाईंको आकारका लागि विभिन्न आकारहरू र विभिन्न आकारहरू। तिनीहरू डिशवॉशर र माइक्रोवेभको लागि उपलब्ध छन् साथै स्क्र्याच-प्रुफ
लोटस ब्लू - २०२१ नयाँ उत्पाद निलो पोर्सिलेन टेबलवेयर सेट, ग्लाजेड रेस्टुरेन्ट डिनरवेयर सिरेमिक
नयाँ र अनौंठो निलो सिरेमिक डिनरवेयर मध्ये एक, यो नीलो आकाश रंगको साथ मात्र होइन, तर स्पष्ट निलो समुद्रमा पनि मिसिन्छ। दृश्य प्रभावको साथ, तपाइँको खाना स्वादिष्ट र राम्रो देखिने बनाउनुहोस्।
GREEN JUNGLE - लोकप्रिय देहाती शैली हरियो तामचीनी मिट्टी डिनरवेयर सेट, ग्रेड एबी पोर्सिलेन भोजनालय को लागी सेट
नयाँ हरियो रेस्टुरेन्ट प्लेट थोक। भेरोज आकारहरूमा विभिन्न ठूला आकारका डिनरवेयर, दक्षिण-पूर्वी एशिया बजार रेस्टुरेन्टहरूको लागि उपलब्ध। तिनीहरू डिशवॉशर र माइक्रोवेभका लागि टिकाउ र सुरक्षित हुन्छन्।
यदि तपाईंलाई आफ्नै विचार टेबलवेयकको लागि कुनै अनुकूलन आवश्यक छ भने, हजुरआमा पेशेवर अनुकूलित सेवा दिनुहोस् यो विचार सत्य हो।
1. सोधपुछ गर्नुहोस्: ग्राहकले तस्विर प्रदान गर्दछ वा मनपर्दो विशिष्टता, आयाम, सामग्री र अनुशासन आवश्यकतासँग विचारको बारेमा छवि चित्र दिन्छ।
2. डिजाइन: डिजाइन टीमले डिजाइनको बारेमा तपाईंको पुष्टिकरणको लागि थ्रीडी छविलाई बाहिर निकाल्छ, र त्यसपछि नमूनाहरूमा काम गर्नुहोस्। एक परियोजनाको सुरूबाट समावेश गरिएको एक परियोजनाको सुरूबाट प्रलोभन उत्पादनहरू ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू अनुरूप उत्पादनहरू सुनिश्चित गर्नका लागि।
Preother। गुणस्तर व्यवस्थापन: उच्च गुणवत्ता संरचनाहरू सौदा गर्न क्रममा, हामी एक प्रभावशाली& दक्ष गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली।
हाम्रो लक्ष्य भनेको हाम्रा ग्राहकहरूलाई उच्च शुद्धता र भरपर्दो गुणवत्तालाई सन्तुष्ट पार्नु हो कि प्रत्येक ग्राहकले टेबुलवेयरमा हाम्रा उत्पादनहरूसँग सहज र विश्वस्त महसुस गर्न सक्दछन्। तीनवटा आठ एसराइज उत्पादनहरूले राम्रो कार्यक्रमका कारण बजारबाट व्यापक रूपमा आफ्ना अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाएका छन्
सेतो टेबलवेयर संग्रहले होटलको प्रत्येक भागको लागि आवश्यकता पूरा गर्दछ, जस्तै लोबी, बुफे, विशेष रेस्टुरेन्ट, मुख्य भोजन, बार ...अधिक जानकारी को लागी सम्पर्क गर्नुहोस्
वैदेशिक किराया समाधान
चिनको सुन, चाँदीको साथ चार्जर प्लेटले भाडाका ग्राहकबाट ईन्क्वायसन पूरा गर्न सक्दछ जो ईन्भेन्टमा यस फेन्सी टेबलवेयर शो आवश्यक छ। ग्लास चार्जर प्लेटले पनि यो विशेष अनुरोधलाई पूरा गर्दछ।
र Color्ग टेबलवेयर संग्रह रेस्टुरेन्ट को विभिन्न अवधारणा पूरा, आगो सI्ग्रह, अर्बन संग्रह, FOGS संग्रह ...तपाईंको जाँचको लागि थप रेस्टुरेन्ट केसहरूको लागि क्लिक गर्नुहोस्
सुपर मार्केट डाइनर सेट
होसेन दुई आठ सिरामिक्सले सेट प्याकेजमा डिनरवेयर प्रदान गर्‍यो, विशेष गरी प्रति १ 18 पीसीको लागि, प्रति सेट २ set पीसी यसलाई सुरक्षित प्याकेजमा प्याक गर्नुहोस् र यातायात या अनलाइन बिक्रीको बखत सामानको सफ्टवेयर सुनिश्चित गर्नुहोस्।
टेबुलवेयर निर्माता नियमनकर्ता 1 1998 1998 to को रूपमा दुई आठ 1 ce ce ceraitiks।
, 0000,000 स्क्वायर मिटर उत्पादन क्षेत्रको साथ, कम्पनी उत्कृष्ट निर्माण कौशल, व्यावसायिक टीम, कडा उत्पादन क्षमता, कडा आधुनिक व्यवस्थापनको साथ सम्पन्न भयो। परम्परागत शिल्प र आधुनिक टेक्नोलोजीको संयोजनको साथ, नयाँ उत्पादनहरू सिर्जना गर्ने र कलात्मक शैलीको अनुसरण गर्ने नीतिलाई दुई आठ आठ इस्त्रा विशेषज्ञहरू; हामी विभिन्न ग्राहकहरूको माग पूरा गर्न उत्साहित उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं।
केवल हामीलाई तपाईंको आवश्यकता बताउनुहोस्, हामी तपाईं छवि भन्दा बढी गर्न सक्दछौं।
एलिया होटल सुस्त ब्रान्डहरू
Jane lee मा सम्पर्क बिक्री